2019 အတွက်အံ့သြဖွယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာများ - Nicheonlinetraffic
2019 အဘို့ကြောက်မက်ဘွယ်စျေးကွက် Tools များ
လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့ content တွေကို, လူကြိုက်များဖြစ်အကြိုက်များပိုမိုရရှိရှိသည်, ရှယ်ယာနှင့်၎င်းတို့၏ site ကိုမှကြီးမားသောအသွားအလာကိုဖန်တီးရန်လိုသည်။ သင်ဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကိုထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့အားအလားအလာဖောက်သည်စေရမယ်သာအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အောင်မြင်သောအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မှီရန်အဘို့အဒါပေမယ့်အကြောင်း, အလုံအလောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။
အတော်များများကကုမ္ပဏီများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီတသမတ်တည်းယုံကြည်စိတ်ချရသောအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်ရန်ရုန်းကန်ပါပြီ။ အခြားသူများကိုပင်ကသူတို့ရဲ့ website သို့မြင်သာမြှင့်တင်ရန်အမြောက်အများအသွားအလာကိုဝယ်ကြလော့။ တစ်ဦး၏အဆိုအရ လေ့လာချက် Zazzle Media ကအများဆုံးကုမ္ပဏီများ 60 န်းကျင်% များသောအားဖြင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အကြောင်းအရာအရည်အသွေးကိုရှိသည်ဖို့ရုန်းကန်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, စျေးကွက်အတွက်ဿုံအဖြစ်အကြီးအဥပမာဖျော်ဖြေနေကြသည်အခြားဘယ်အရာကိုကုမ္ပဏီများနှင့်က်ဘ်ဆိုက်များကို သိ. အသုံးပြုပုံသင်ပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အတူတက်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ website မှာမြင့်မားတဲ့ converting အသွားအလာကိုဝယ်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမရှိဘဲဧည့်သည်များပိုမိုမြင်သာဖြစ်လာကူညီပေးပါမည်။ ဤတွင်အကြီးအစျေးကွက်၏ဥပမာ:
သင်သည်သင်၏ site ကိုအတွက်အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် Hubspot သင့်ရဲ့အခြေခံစံနှုန်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဤသည် Multi-ဒေါ်လာသန်းကုမ္ပဏီဖွင့်ဘယ်နေရာမှာထံမှသည်ထင်ရှားမထားပါဘူး, ကအလွန် In-depth နှင့်အရည်အသွေးဘလော့ဂ်ပို့စ်များကိုရေးသားသူတို့ရဲ့ contents တွေကိုအဆင့်မြှင့်အချို့ခွဲဝေမှုအချက်အချာရှိခြင်းနှင့်ပင်၎င်းတို့၏လူမှုရေးများအတွက်ဖန်တီးမှုဗီဒီယိုများအတူတက်ရောက်လာသောအားဖြင့်၎င်း၏လမ်းဖွင့်ထုတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ် မီဒီယာ။ သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်တူညီအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုသူ-generated content တွေကိုရှိခြင်းအားဖြင့်, Glossier အထူးသဖြင့် Instagram ကိုပေါ်, အမျိုးမျိုးသောလူမှုမီဒီယာကွန်ရက်များအတွက်၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်ရာထူးတိုးပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာပရိသတ်ကိုမှတ်ချက်များ features ကတည်းကအဲဒါကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ကိုချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရကြိုက်နှစ်သက်သူကိုလူအတော်များများရောက်ရှိ။ ဒါဟာပိုပြီးဖောက်သည်များကိုဆွဲဆောင်ရန်အကြောင်းအရာ Instagram ကိုပြသအတွက်အလွန်ပွင့်လင်းသည်။
ဤသည်များသောအားဖြင့်က၎င်း၏ပရိသတ်ကိုထံမှအသွားအလာကိုဖန်တီးရန်အမျိုးမျိုးသောထုတ်ဝေနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာကွန်ရက်များအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောကျော်ကြားတဲ့မြေားတှငျထုတ်ဝေထားဘူး။ ဒါဟာအစက၎င်း၏ထုတ်ကုန်ကြော်ငြာများတွင်ရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသည်။ Superdrug လည်းအနုပညာရှင်ကမ်ပိန်းကို အသုံးပြု. အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သည်နှင့်အစဉ်မပြတ်၎င်း၏ထုတ်ကုန်အပေါ်တစ်ဦးရှယ်ယာ button ကိုနေရာ။ ဤသည်ကပိုမိုလွယ်ကူအများပြည်သူသူတို့ရဲ့ content တွေကိုမျှဝေဖို့စေသည်။
ဤစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဥပမာသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအမှီမပြုဘဲဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုသိရှိပြီးသင့်တော်သောအကြောင်းအရာများကိုပေးသည်။ သူတို့၏မဂ္ဂဇင်းနှင့်ပတ်သက်သောအခါဓာတ်ပုံများ၊ ဒီဇိုင်းနှင့်ပါဝင်မှုများသည်အလွန်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကြောင့်သူတို့ကိုအောင်မြင်မှုရစေသည်။ စာဖတ်သူများသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်အီးမေးလ်များမှသူတို့၏စာဖတ်သူများကိုအထူးဂရုပြုပြီး၎င်းတို့အကြောင်းရေးသားရန်ခေါင်းစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ စာဖတ်သူ ၃၇ သန်းဟာသူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်တွေဟာထိရောက်မှုရှိကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသထားတယ်။
ဒီတစ်ခုပုံရိပ်တွေ၎င်း၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းအချက်အလက်များအသုံးပြုသည်။ လူတိုင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းအချက်အလက်များချစ်သောသူ, ဤ Shutterstock က၎င်း၏ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ရန်အသုံးပြုသည်အရာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာအစရှယ်ယာခလုတ်, ပုံများ, ဗွီဒီယိုများနှင့်ဂီတနေရာ။ ၎င်း၏လူမှုမီဒီယာရှေ့မှောက်တွင်လည်းအလွန်လူကြိုက်များအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုမှန်ကန်အသွားအလာကိုဝယ်ယူရန်နှင့်၎င်းတို့၏က်ဘ်ဆိုက်များမှ traffic ကိုဖန်တီးရန် Shutterstock အသုံးပြုသောကဤနည်းလမ်းများထည့်သွင်းဖို့မရွေးချယ်နိုင်သည်။ သို့သျောထိုနောက်တဖန်တစ်အချိန်ကုန်ဖြစ်စဉ်ကိုပါပဲ။
ဒါဟာသူတို့စျေးကွက်အတွက်ထိပ်တန်းထစ်များမှာသေချာစေရန်အမျိုးမျိုးသောမဟာဗျူဟာများ အသုံးပြု. ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက Coca-Cola ကယင်း၏ဝေမျှမယ်အတွက်ကိုကာကိုလာကင်ပိန်းဟာပုလင်းပေါ်မှာလူများ၏အမည်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤသည်မှာလူများ၏အာရုံကိုဖမ်းမိခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအမည်များကိုဆောင်သောဆိုဒါတွေမဝယ်ဖို့ဖောက်သည်အားပေးတယ်။ သူတို့ကဤနည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုပြီးသန်း 250 ကျော်ပုလင်းရောင်းချခဲ့သည်။ သင်သည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်ကိုက်ညီရန်သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကိုစိတ်တိုင်းကျအားဖြင့်ဒီကိုသုံးနိုင်သည်။ ယင်းအလိုအရ သုတေသနလုပ်ငန်း Interbrand အသုံးပြုပုံ 2015 အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာတတိယအကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
400,000 အသုံးပြုသူများသည်နှင့်၎င်း၏လူမှုမီဒီယာများတွင်တစ်ဦးထက်ပိုသန်းနောက်လိုက်ကျော်ရှိခြင်း, Buffer အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်လူသိအများဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အလွန်မြင်နိုင်က်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်သူတို့ content တွေကိုထုတ်ဝြေခင်းများနှင့်နေ့ရက်ကာလ၌မကြာခဏသူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်များထုတ်ဝေခြင်းအားဖြင့်, Buffer ကျော်ကြားလာပြီး 100,000 အသုံးပြုသူများကိုကျော်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်အီးမေးလ်ကိုစျေးကွက်ကတဆင့် shareable အကြောင်းအရာကသူတို့ကိုလူအတော်လေးကြီးမြတ်အရေအတွက်ကဆွဲဆောင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
စျေးကွက်၏အထက်ပါဥပမာအနေဖြင့်, သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပိုပြီးလူကြိုက်များစေနိုင်သည်နှင့်အခြားသူများအကြားဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက် သိ. ရုံရုပ်ပုံများ, ဓာတ်ပုံများ, audio, ဗီဒီယိုများ အသုံးပြု. ၎င်း၏တိုးတက်မှုနှုန်းမြှင့်တင်ရန်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတိုးမြှင့်ဖို့ရညျအသှေးအသွားအလာကိုဝယ်ခြင်းငှါဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။